मल्लले जिते काल्र्सवर्ग गल्फ सिरिज २०१८
काठमाडौं । काल्र्सबर्ग गल्फ सिरिज २०१८ को अन्तिम लिग अर्थात् देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित गल्फिङ इभेन्टको फाइनल सिरिज सकिएको छ । तीनवटा सिरिजको यस प्रतियोगितामा देशका प्रमुख उदयमान गल्फरहरुको कडा प्रतिस्पर्धा रहेको थियो ।
तीनवटा सिरिजमध्येको अन्तिम सिरिजको सुरुवात गत २० गतेबाट भएको थियो । आफ्नो होम क्लबहरुको भ्यालिड ह्याण्डीक्याप भएका देशभरिका उदयमान–गल्फरहरुलाई पनि यस इभेन्टमा सुनौलो मौका दिइएको थियो । यो सिरिज ¾ ह्याण्डीक्यापका साथ स्टेबेलफोर्ड फम्र्याटमा खेलिएको थियो ।
पवित्र कुमार कार्कीले ३०० अंक प्राप्त गरी आफ्नो लागि नेट सेक्सनमा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भए भने पृथ्वी मल्लले ४९० अंकका साथ सिरिजका ग्रस च्याम्पियन बन्न सफल भए ।
गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुहृद घिमिरेले आफ्नो अनुभव बाँड्दै साँच्चै नै लामो बाटो तय गरेको बताए । काल्र्सवर्ग यस सिरिजको प्रायोजक सन् १९९० देखि रहँदै आएको छ भने यसले प्रतिभाशाली उदीयमान गल्फरहरुलाई मौका दिने गरेको छ ।
त्यस्तै, गोर्खा बु्रअरीका बजार प्रबन्धक रोजन अमात्यले सहभागीहरुलाई उत्साहित हुँदै धन्यवाद दिए । त्यस्तै गोकर्ण फरेष्ट रिजर्टका प्रमुख गल्फ निर्देशक दीपक आचार्यले काल्र्सबर्ग गल्फसिरिज उदीयमान गल्फरहरुका लागि प्रतिस्पर्धात्मक गल्फ खेल्ने एक उत्कृष्ट मञ्च रहेको बताए ।
ककसले जिते ?
नेट च्याम्पियन पवित्रकुमार कार्की
ग्रस च्याम्पियन पृथ्वी मल्ल
नेटविजेता पवित्रकुमार कार्की
ग्रस उप–विजेता पृथ्वीमल्ल
सिनियर विजेता एलटी जेनरल केएनएस थापा
महिलातर्फका विजेता युजीन सिम
क्लोजेष्ट टु द पिन डा. निरञ्जन शर्मा
मोष्ट बर्डिज पृथ्वी मल्ल
काठमाडौं । काल्र्सबर्ग गल्फ सिरिज २०१८ को अन्तिम लिग अर्थात् देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित गल्फिङ इभेन्टको फाइनल सिरिज सकिएको छ । तीनवटा सिरिजको यस प्रतियोगितामा देशका प्रमुख उदयमान गल्फरहरुको कडा प्रतिस्पर्धा
कार्की र मल्लले जिते कार्ल्सवर्ग गल्फ सिरिज् २०१८
काठमाडौं। कार्ल्सवर्ग गल्फ सिरिज् २०१८ को अन्तिम लिग अर्थात् देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित गल्फिङ इभेन्टको फाइनल सिरिज समाप्त भएको छ। । ३ वटा सिरिजको यस प्रतियोगितामा देशका प्रमुख उदयमान गल्फरहरुको कडा
काठमाडौं । टर्किस एयरलाइन्स वर्ल्ड गल्फ कपको छनोट प्रतियोगितामा बैशाख अन्तिम साता हुने भएको छ । आयोजक टर्किस एयरलाइन्सले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता वैशाख २९ गते हुने जानकारी गराएको